Ilaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyo ahmiyada ay u leeyihiin mustaqbalka | Cusbooneysiinta Cagaaran
Inbadan iyo in ka badan ayaa adduunka laga soo saarayaa ilaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Tani waa sababta oo ah xaalufinta shidaalka shidaalka ayaa horeyba u dhow oo wasakhaynta ay soo saartay gubashada gaaska, saliidda iyo dhuxusha ayaa horumarinaysa saameynta halista ah ee isbeddelka cimilada. Faa'iidada dib-u-cusboonaysiinta ayaa soo hagaageysa maalin kasta iyo tikniyoolajiyadda waxtarka tamarta ayaa ka dhigeysa sharadka tamarta kale mid soo jiidasho leh
Ma rabtaa inaad ogaato ilaha tamarta la cusboonaysiin karo iyo ahmiyada ay u leeyihiin mustaqbalka tamarta meeraha?
1 Adduunku wuxuu u baahan yahay ilo tamar oo la cusboonaysiin karo
2 Isbedelka qaabka tamarta yurubiyanka
3 Noocyada kala duwan ee ilaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo
4 Maalgashiga tamarta dib loo cusboonaysiin karo
5 Dhaqaale loogu talagalay maalgashiga dib-u-cusboonaysiinta
6 Sababaha loo adeegsado ilaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Adduunku wuxuu u baahan yahay ilo tamar oo la cusboonaysiin karo
Tamarta nadiifka ah ayaa si sii kordheysa lagama maarmaan u ah oo waxtar badan leh. Adduun iyo dhaqaale ku dhisan tamarta la cusboonaysiin karo ayaa fure u ah helitaanka suuqyada tamarta iyo helitaanka tartan. Maalgelinta tamarta dib loo cusboonaysiin karo, in kasta oo markii hore qaali ahayd, waxay naga caawin kartaa inaan ku guuleysano dagaalka ka dhanka ah isbeddelka cimilada sannadihii la soo dhaafay.
Aynu xusuusano in dib loo cusboonaysiin karo ma sii daayaan gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo, ama ugu yaraan aad u yar, marka la barbar dhigo shidaalka laga helo shidaalka sida saliidda iyo dhuxusha.
Waxaa jira magaalooyin badan oo yurub ah oo qaaday talaabooyin waawayn oo adduunka ah oo dib loo cusboonaysiin karo taasna mahadeeda, waxay awoodeen inay yareeyaan qiiqa gaaska lagu sii daayo.
In kasta oo sharciga Yurub uusan noqon karin mid dalbanaya, waxaa jira magaalooyin waaweyn oo dhexdhexaad ah oo laba tallaabo ka horreeya sharciga. Si kale haddii loo dhigo, waxay ku guuleysteen inay u kobciyaan tikniyoolajiyad ahaan xagga tamarta la cusboonaysiin karo iyo qiiqa ka baxa oo aad uga badan waxa sharcigu u baahan yahay.
Isbedelka qaabka tamarta yurubiyanka
Beddelidda qaababka tamarta waa mid aad u adag. Illaa iyo hadda, waxay ugu shaqeynaysay si "raaxo leh" hababka shidaalka. Si kastaba ha noqotee, dhulkeenna ayaa dalbanaysa in qaab tamar cusub la hormariyo iyadoo lagu saleynayo tamarta aan soo saareynin gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo si looga hortago kuleylka sii kordhaya ee adduunka.
Doorka magaalooyinka iyo shirkadaha waaweyn ee u heellan nadiifinta tamarta ayaa lagama maarmaan u ah dhiirrigelinta isbeddelka ku wajahan qaabka tamarta cusub ee xaddidan.
Inkasta oo baahida meeraha ee isbeddelka tamarta ay tahay mid deg deg ah, waxay u muuqataa in Dowladdu ay dhagaha ka furaysaneyso PP-ga kuma qamaro tamarta la cusboonaysiin karo, laakiin taa bedelkeeda la sii socon doono adduunka shidaalka shidaalka.
Magaalooyinka sida Barcelona, ​​Pamplona ama Córdoba waxay ku guda jiraan abuurista shirkado suuq geyn ka sameeya tamarta, in kasta oo saqafku diidayo in qofku iskiis u cuno isla markaana u adkeeyo hawsha kor u qaadista heer maxalli ah.
Noocyada kala duwan ee ilaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Maskaxda ku hay in ay jiraan ilo fara badan oo tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Ilaa hadda, tamarta qorraxda iyo dabaysha ayaa ah kuwa ugu waxtarka badan, guud ahaan.
Tamar-dhuleedka ayaa gebi ahaanba ku tiirsan meesha uu ku yaal saxanka tectonic meesha uu ku yaal. Isticmaalkiisa ugu weyn waxaa loogu talagalay kululaynta biyaha ee guryaha la deggan yahay iyo isbitaalada.
Dhinaca kale, waxaan heleynaa tamarta tamarta. Tamarta Haydarooliga waxaa wata biyo-dhaca biyaha kaydka. Isbaanishka, abaaraha awgiis, xaddiga tamarta tamarta ee la soo saaray ayaa ka yaraatay. Roobabkii ugu dambeeyay tan iyo bishii Febraayo ee la soo dhaafay, ayaa kaydadku ay dib uga soo kabanayaan heerarkooda biyaha awood koronto ahaana marba marka ka dambeysa way sii kordheysaa.
Marka laga hadlayo tamarta kuleylka ee qoraxda, isla waxbaa ku dhaca tamarta dhulka. Gudaha Spain dhirta thermosolar aad ayey u kooban yihiin jarista dowladda PP awgeed.
Maalgashiga tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Dad aad u tiro badan ayaa ka fikiraya suurtagalnimada maalgashi lagu sameeyo horumarinta tamarta la cusboonaysiin karo. Tiro badan oo xaalado ah, go'aankan ayaan gebi ahaanba suurtagal ahayn haddii aan la helin nooc maalgelin ah, maaddaama oo ay leedahay kharashyo dhaqaale oo bilow ah.
Xitaa haddii aad kaliya rabto inaad dhigto xoogaa balal qoraxda ah si aad ugu keydiso biilka korantada, Maalgelinta tamarta dib loo cusboonaysiin karo ma ahan mid rakhiis ah. Badanaa, lacagta la maal galiyay waxay iska bixisaa mustaqbalka fog. Muuqaalka kaliya ee wanaagsan ee tamarta la cusbooneysiin karo ayaa ah in sannadkan hoos loo dhigay qiimaha baararka sawir qaadeyaasha ah, maadaama dhowr sano ka hor ficil ahaan aan macquul aheyn in la helo.
Dhinaca kale, horumarka tikniyoolajiyadda waxa ka dhashay soo saaridda baalal sawir qaade ah oo wax-ku-ool weyn ku leh helitaanka tamarta, si markaa loo helo faa iidooyin dheeri ah iyo muddooyinka amortiation-ka ee maalgashiga la soo gaabiyo.
Maalgashiga tamarta dib loo cusboonaysiin karo waxay noqoneysaa mid soo noqnoqda iyada oo ay ugu wacan tahay siyaasadaha tamarta ee ay adeegsato Dowladdu. Waxaa jira dhowr nooc oo ah maalgelinta tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Kuwani waxay kuxiran yihiin in isticmaalka tamarta uu yahay mid shaqsi ama maalgashi ganacsi. Waxaa muuqata in qadarka baalayaasha ku shaqeeya cadceeda ee uu guri ugu baahan yahay iskiis u cunitaankiisa uusan la mid ahayn shirkad dhigeysa baarkinka cadceedda.
Dhaqaale loogu talagalay maalgashiga dib-u-cusboonaysiinta
Haddii aan weydiisano amaah maalgashiga bilowga ah waa inaan tixgelin siino taas, markay tahay soo celinta, waxay yeelan doontaa dulsaar iyo guddiyo. Si tan looga fogaado, waan awoodnaa amaahda shaqsiyeed ku hesho shirkadaha maaliyadeed dadka dhexdooda. Ururradan waxay u shaqeeyaan si la mid ah bangiyada laakiin uma shaqeeyaan.
Dhowr sano ka hor waxaa jiray koror ku yimid dib-u-cusbooneysiinta gudaha Spain taas oo ay ugu wacan tahay kaalmooyinka ay siiso Dowladdii hore. Si kastaba ha noqotee, imaatinka PP dhammaan gargaarkaas waa la waayey. Maxaa ku kalifay kooxdan inay ku cambaareeyaan maamulka hada jira maxkamada gudaheeda inay u hogaansami waayaan qodobada deeqaha iyo kabida lagu heshiiyay.
Maalgelinta tamarta la cusbooneysiin karo waxay noqon kartaa qaali marka hore, laakiin mustaqbalka fog waxaad heleysaa damaanad qaad ah inaad wax walba ku darsato oo aad hesho faa'iido.
Sababaha loo adeegsado ilaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Ugu dambeyntiina, waxaan sheegi doonnaa sababaha ugu waaweyn ee ah inaad ku sharraxdo tamarta la cusboonaysiin karo:
Waa hab firfircoon oo la iska kaashado yareynta wasakheynta iyo in lala dagaallamo isbedelka cimilada meeraha.
Waxay u oggolaaneysaa shakhsiyaadka ama dadweynaha ka fog ama ka go'doonsan xarumaha magaalooyinka inay helaan adeegyo sida gaaska, koronto, Agua, shidaalka, iwm, oo aan ku imaan qaab caadi ah.
Badeecadaha intooda badani waxay leeyihiin a Qiimaha la aqbali karo. Kaliya alaabooyinka qaar waxay leeyihiin qiimo ka sareeya laakiin waxay leeyihiin faa iidooyin kale sida inay yihiin kuwo adkeysi badan oo wax ku ool ah, ma wasakhoobaan, waxay leeyihiin kharashyo dayactir oo yar, iwm. Marka kharashka ayaa la qoondeeyay waqti yar gudahood.
Iibsashada alaabada cagaaran waxay taageertaa suuqan sii kordhaya waxayna door bidaa abuuritaanka shaqooyin cusub qaybta tamarta la cusboonaysiin karo.
Teknolojiyadaha cagaaran ayaa u oggolaanaya keydinta ilaha dabiiciga ah, dhalin yar gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo y qashin markaa deegaanka ayaa laga taxadaraa. Waa hab lagu soo saaro laguna kobciyo waxqabadyada aadanaha qaab waxyeello yar u leh meeraha sidaasna aan lagu sii wadin sii xoojinta dhibaatooyinka deegaanka ee hadda jira.
Guud ahaan teknoolojiyada deegaanka ama cagaaran way fududahay oo way fududahay in loo isticmaalo baahiyaha isticmaale ee kala duwan.
Sida la arki karo, ilaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo ayaa si aad ah u sii kordhaya talaabada loo qaadayo kala-guurka tamarta ayaa u dhaw una sii dhowaanaysa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Ilaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyo ahmiyada ay u leeyihiin mustaqbalka
Rafael Sanz dijo
Ma aqaano sababta ay had iyo jeer ugu xun tahay habka loo soo saaro korantada Spain, waxaan nahay mid ka mid ah wadamada ugu fiican adduunka.
dib loo cusboonaysiin karo kan afraad ama shanaad ee adduunka qofkiiba iyo sanadkiiba, iyo isku dar ahaan waxaan noqon doonaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican Yurub.
In yar oo is jecel
Jawaab Rafael Sanz
Kuwanu waa ilaha tamarta ee ay tahay inay dawladuhu bilaabaan inay ka hirgaliyaan wadamada si ay u bixiyaan xaalado wanaagsan oo jawiga u habboon friendly ..
Astaamaha iyo shaqooyinka Golaha Amniga Nukliyeerka